reo ambiny kosa tafaporitsaka. Ireo olona teo amin’ny manodidina, izay nemala ireo jiolahy nitsoaka tao anatin’ny fefin’ny tranony, no voasambotra.
Tokony ho tamin’ny 10 ora maraina omaly no nitranga ity fitifirana ity. « Nandeha an-tongotra izahay, avy eny amin’ny tetezana ka nihazo ny kianja filalaovana baolina manamorona ny ranon’Ikopa, no tratran’ireo jiolahy. Miisa enina izy ireo ary mitondra antsy maranitra. Avy hatrany dia nendahin’izy ireo izahay rehefa avy nambanany tamin’ny antsy », hoy ny iray tamin’ireo voaendaka teny Anosizato omaly.
Vola 5 000 ariary sy finday roa no fantatra fa lasan’ireo jiolahy ireo. Tamin’io fotoana io indrindra no sendra nandalo ny polisy ka nilatsaka an-tsehatra avy hatrany nanenjika. « Vao nahita polisy ireo olon-dratsy dia nitsoaka. Nanenjika ary nitifitra mihitsy ireo polisy ka voa teo amin’ny feny ny iray tamin’ireo jiolahy », hoy ireo nanatri-maso teny an-toerana.
« Nitsoaka tao anaty lobolobo io jiolahy io rehefa voatifitra. Nitsambikina tamin’ny tambohon’ny tananan’olona iray avy eo ary afa-nitsoaka. Nisy nahita tsara ny nitsoahany saingy tsy nampandre ireo polisy mihitsy ireo olona ireo. Izany no antony nisamborana azy ireo ka miisa enina ireo nosamborina ireo », hoy ireo polisy eny Mahamasina avy nanenjika ireo jiolahy.